Izinto ezi-6 eziphambili kwiPhulo lokuThengisa ngeSMS eliphumelelayo Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 8, 2017 NgeCawa, uDisemba 10, 2017 Douglas Karr
Abathengisi bayaqhubeka nokujongela phantsi ukusebenza kwe imiyalezo ebhaliweyo (i-SMS) kwimikhankaso yentengiso. Ayisiyonto ephucukileyo njengezicelo zeselfowuni kunye neewebhusayithi eziphuhlisiweyo zeselfowuni- kodwa isebenza ngakumbi. Ukufumana umntu abhalise ngeSMS kulula kakhulu kunokubenza bakhuphele usetyenziso lwewebhu leselula ngomyalezo wokutyhala… kwaye amaqondo okuguqula anokuba ngaphezulu!
The Izixhobo zePhulo eliKhulu lokuThengisa ngeSMS infographic ukusuka SlickText Iqaqambisa amanqaku aphambili ama-6 ekufuneka ujongiwe xa uthumela nawuphi na umyalezo wephulo lokuthengisa. Imizobo iqinile, ulwazi luyasebenza, kwaye siyathemba ukuba uyalonwabela ulwazi njengoko silubekile!
Izinto eziphambili ezi-6 zePhulo lokuThengisa ngeSMS elisebenzayo
Yenza unikezelo oluxabisekileyo- ngaphandle kwayo, uya kuphulukana nababhalisi abaxabisekileyo abakunike ipropathi yearhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ukuze ubakhuthaze.
Qala ngesithembiso -Ukutsala kunye nokugcina wonke umntu obhalisileyo kwangoko. Ukuba bacinga ukuba umyalezo wakho yinkcitha-xesha, abayi kubhalisa.
Bandakanya umnxeba othe ngqo kwisenzo -Ababhalisi bakho banokuthi basebenze kuyo, nokuba yikhowudi yesaphulelo okanye ikhonkco ngqo.
Yenza imvo yongxamiseko -Umyalezo wakho kufuneka uthunyelwe xa ufuna umrhumi ukuze uphendule kwangoko.
Yenza isithembiso sodwa - Imiyalezo ebhaliweyo inezinga elivulekileyo nelingaguquguqukiyo lokuvula imiyalezo, musa ukuyichitha kwizinto eziqhelekileyo. Yenza ababhalisile bazive ngathi babalulekile.
Chaza igama lakho lophawu -Ngoko ababhalisi bayazi ukuba ngubani othumele umyalezo. Ayinguye wonke umntu odwelisa onke amanani kunxibelelwano lwabo.
Khuphela iSlickText's Isikhokelo sentengiso seSMS Ingcebiso nangakumbi ekusebenziseni umkhankaso wakho wokuthumela imiyalezo.
tags: amaphulo ahambayoi-SMSI-sms yokubiza isenzoIphulo lesmssms ctaukuthengisa ii-smsumnikelo wesmsukuthengisa imiyalezoimiyalezo ebhaliweyoimiyalezo ebhaliweyo yokubiza isenzoumkhankaso wemiyalezo ebhaliweyoImiyalezo ebhaliweyo ctaUnikezelo ngemiyalezo ebhaliweyo
Sparkpost: Inkonzo yokuNikezelwa nge-imeyile kwiApp yakho okanye iSiza
Kunene ukuya kwinqanaba. Ukuthengisa ngeSMS yinto ongenakuyijongela phantsi nangawo maxesha. Enkosi!